एभिन्युज टेलिभिजनसांग्लालाई निचोरेर बनाइएको जुस चीनमा लोकप्रिय - एभिन्युज टेलिभिजन
22 Baishakh 2075 Saturday 8:02 am प्रतिकृया दिनुहोस
चीन । तपाइँलाई के को जुस मन पर्छ ? कसैले तपाइँलाई यो प्रश्न सोधे, जवाफ पक्का पनि कुनै फलफुल वा तरकारीको नाम नै हुने छ । तर कुनै किरा फट्यांग्रा वा जनावरको पनि जुस बन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ भने हामी मध्ये कमैलाई मात्र जानकारी होला । तर चीनमा यस्तै भइरहेको छ ।
अर्थात, चिनियाँहरुले सांग्लालाई निचोरेर बनाइएको जुस पिउने गरेका छन् । चिनियाँहरु सांग्लाको जुस मात्र पिउँदैनन्, उनीहरुले यसको व्यापार गरेर भएको आम्दानीले घरपरिवार नै चलाउँदै आएका छन् । साङ्लाको जुुसमा रहेको औषधीय गुणले मानिसहरुको यसप्रति आकर्षण बढेको ठानिएको छ ।
साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार जुस उत्पादन गर्ने क्रममा चीनको शिजियाङ शहरमा रहेको एक औषधी कम्पनीले वर्षेनी ६ सय करोड सांग्ला उत्पादन गर्ने गरेको छ । करिब दुई वटा खेल मैदान बराबरको क्षेत्रफलमा पैmलिएको एक विशाल भवनमा सांग्लाको व्यवसायिक खेती हुने गरेको छ ।
गाढा अध्यारो बनाइएका उक्त भवनका कोठाहरुमा उच्च तापक्रम कायम गरेर सांग्लाहरु पालिँदै आएको हो । भवनका कोठाहरुमा राखिएका सांग्लालाई घुम्न र प्रजनन गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता पनि दिइएको छ । सांग्लाको रेखदेश गर्न उक्त भवनका हरेक कोठामा स्वचालित प्रविधि जडान गरिएको छ । यही प्रविधिले सांग्लाका लागि खाना, दाना र छानाको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ ।
वयस्क अवस्थामा पुगेका सांग्लाको जुस मात्र औषधीय गुण भएको हुने भएकाले तिनको मात्र शिकार गरिने गरिएको छ । यसको प्रयोग झाडापखाला, उल्टी, पेटको अल्सर, श्वास गन्हाउने लगायत अन्य विरामीहरुका लागि समेत उपयोगी रहेको चिनियाँहरुले दाबी गर्ने गरेका छन् ।
सानडान्स एग्रीकल्चर युनिभर्सिटीका प्रोफेसर तथा इन्सेक्ट एशोसिएशन अफ सानडान्स प्रोभिन्सका निर्देशकले पनि सांग्लो वास्तवमा चमत्कारीक औषधी भएको बताएका छन् । चीनमा औषधी उत्पादन गर्ने प्रायोजनले सांग्लो पालनलाई सरकारी सहयोग पनि प्राप्त हुने गरेको छ ।।